पूर्वमाओवादी नेता उठेकै पदमा चुनाव, संयोग कि रणनीति?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
पूर्वमाओवादी नेता उठेकै पदमा चुनाव, संयोग कि रणनीति?
मणि थापा भन्छन्- 'राजनीतिमा यसै हुन्छ त भन्न सकिन्न, हामी हार्नु भनेको ओली कमरेड र महाधिवशेनको प्रस्ताव हार्नु हो'
काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) दशौं महाधिवेशनमा सोमबार साँझ ९ बजेदेखि सर्वसम्मत हुन नसकेका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य पदमा निर्वाचन हुने गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । एमालेको पदाधिकारीमा पूर्वमाओवादीबाट आएका नेताहरू उम्मेदवार बनेका पदमा निर्वाचन हुने भएको छ ।
पार्टी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीसँग भीमबहादुर रावलले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । ओलीले सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्नका लागि गरेका प्रयासलाई असफल बनाउँदै रावलले महाधिवशेनलाई मतदानसम्म तन्काएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल सर्वसम्मत भएका छन् । ६ उपाध्यक्षमा पूर्वमाओवादीका रामबहादुर थापा पनि उम्मेदवार छन् । ओलीले गएराति उपाध्यक्षमा थापासँगै युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उपाध्यक्षमा घनश्याम भुसालले ओलीको प्रस्तावमा 'बागी' बनेर उम्मेदवारी दाखिला गरेका छन् ।
त्यस्तै, महासचिवमा शंकर पोखरेल र उपमहासचिवमा प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमालविरुद्ध कसैले उम्मेदवारी दिएन । र त्यसमा चुनाव हुने छैन । पूर्वमाओवादी नेताहरू उम्मेदवार बनेको सचिव पदमा भने चुनाव हुने भएको छ ।
सचिवमा ओलीले टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र पद्मा अर्यालको नाम सिफारिस गरेका थिए । सचिवमा उम्मेदवारी दिएका भट्ट र रायमाझी पूर्वमाओवादी हुन् । यी नामलाई प्रतिनिधिहरूले ताली पिटेर 'पारित' गरेको थियो । तर, सचिवमा थप दुई नेताको उम्मेदवारी परेको छ । सचिवमा भीम आचार्य र टंक कार्कीले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । यी दुई नेताले पनि ओलीको प्रस्तावमा 'बागी' उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
एमाले महाधिवेशनमा ओलीबाहेक पदाधिकारीमा माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू उम्मेदवार भएको पदमा मात्रै निर्वाचन हुनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई एमालेले कसरी मत दिन्छ वा स्वीकार्छ भन्ने यो निर्वाचनबाट देखिने नेताहरूले बताएका छन् ।
पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समिति हलले पारित गरेका नामहरूलाई निर्वाचित गर्ने दायित्व प्रतिनिधिको रहेको एमाले नेता मणि थापाले बताएका छन् । 'हाम्रो उम्मेदवारी महाधिवेशनको हलले स्वीकार गरेको हो । आधिकारिक रूपमा अध्यक्ष मण्डलले प्रस्तुत गरेर महाधिवेशनको बन्दसत्रले पास भएको उम्मेदवारी हुनाले त्यसलाई निर्वाचित गराउनु सबै प्रतिनिधिको दायित्व हुन्छ,' पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेता थापाले भने । आफूले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पारित गर्ने दायित्व ओलीको पनि भएको थापाको भनाइ छ ।
पूर्वमाओवादीलाई एमाले कार्यकर्ताले सहजै स्वीकार गर्लान् र ? भन्ने प्रश्नमा थापाले राजनीति भएकाले एकिनका साथ भन्न नसकिने बताए । उनले भने, 'राजनीतिमा यसै हुन्छ त भन्न सकिन्न । हामी हार्नु भनेको ओली कमरेड र महाधिवशेनको प्रस्ताव हार्नु हो ।'
प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १६:०४
नाकामा एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएकाको नमुना जीन सिक्वेन्सिङका लागि एनपीएचएलमा पठाउनुपर्ने
काठमाडौँ — नेपालका विभिन्न नाकामा परीक्षण मापदण्ड अनुसार कोभिड-१९ को एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएकाहरूको थप नमुना संकलन गरेर जीन सिक्वेन्सिङका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाउन स्वास्थ्य सेवा विभागले हेल्थ डेस्कहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण घट्दो क्रममा भएपनि दक्षिण अफ्रिका तथा केही मुलुकहरुमा नयाँ भेरियन्ट 'ओमिक्रोन' देखिएकाले सजगता अपनाउन थप परीक्षण सुरु गर्न विभागले पत्राचार गरेको हो ।
सोमबार एक सूचना जारी गर्दै विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले परीक्षण मापदण्डअनुसार एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ आएकाहरुको थप नमुना संकलन गरेर प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग समन्वय गरी जीन सिक्वेन्सिङका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा नमुना पठाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छन् ।
विभागले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई भने नाकाहरुबाट संकलित नुमनाहरुको जीन सिक्वेन्सिङ परीक्षण मिलाउनुपर्ने बताएको छ ।
साथै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सबै सीमा नाकाहरुमा संकलित कोभिड-१९ एन्टिजेन पोजिटिभ नमुनालाई एनपीएचएलसम्म पुर्‍याउनका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्न तथा प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्रले संकलित नमुनाहरुलाई राष्ट्रिय प्रयोगशालासम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नका लागि सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।
प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १६:०२